Embroidery yekomputa → Embroidery yekombuta / P & M yekushongedza zvipfeko
Kushongedzwa kwemakomputa ndeimwe yenzira dzinozivikanwa dzekumaka mbatya nemachira. Izvo zvinokonzeresa nhoroondo yaro kutangira kumashure mazana emakore, uko munguva dzekare vakadzi vakaruka mapatani pamachira nemaoko.
Mazuva ano, machira anoshandiswa otomatiki achishandisa komputa-inodzorwa muchina pahwaro hwechirongwa chekushongedza, icho chimwe nechimwe chakagadzirirwa yega yega graphic dhizaini.
Zvidiki zvigadzirwa pamachira zvine huremu hwakakura kupfuura hwetsika t-shati zvinotaridzika zvakanyanya. Zvipfeko zvakagadzirirwa zvine zvakawanda zvakanaka. Chigadzirwa chakadai chinomira kunze kwemakwikwi, chinosimbisa chimiro chekambani uye chinovaka pfungwa yenharaunda pakati pechikwata mune zvekupfeka.
Embroidery yekombuta inoitwa pane zvipfeko uye machira
Embroidery yemakomputa inogona kushinga kushandiswa kugadzirwa kwemachira emagetsi zvakare kushambadza zvipfeko. Yakafukidzwa logo uye zita rekambani pane polówkach, mabhegi kana tauro inogona kuve chipo chakanaka chevatengi kana vebhizinesi vadyidzani. Nekushandisa zvipfeko zvakadaro kana zvigadzirwa zvekushambadzira, ivo vanozosimudzira iyo brand.
Pamusoro pekupfeka, machira anowanzo gadzirwa pane zvigadzirwa zvakaita semabhegi, ngowani, matauro uye mabhati ekushambidza. Iko rakashongedzwa logo rakasimba uye rakasimba kudzvanyirira pane dzimwe nzira dzekumaka netsvimbo-pane mifananidzo.
Tsika yekushongedzwa kwemakomputa
Kusungwa inzira yekushongedza inozivikanwa kare, apo vakadzi vakashongedzwa nemaoko mapfekero, machira etafura uye mireza. Runako nekusimba kwekushongedzwa kwakaita kuti zvive chinhu chetsika dzakawanda, pamwe nechiratidzo chemamwe matunhu muchimiro chevanhu zvipfeko nemabhanhire.
Iyo mhando yepamusoro uye kusimba kwekushongedzwa kwekumaka kwawanawo kunyorera mukushambadzira kwemazuva ano. Vashandi vakapfeka zvipfeko zvine mucherechedzo wekambani vanowanzoonekwa sevamiriri vemakambani akavimbika uye kwete asingazivikanwe makambani. Zvakare machira ehotera muchimiro chematauro kana mabhati ekushambidzira ane logo anowedzera mukurumbira wehotera.
Varindiri nevanoona nezvekushambadzira vakapakata machira echinyakare echikafu, akadai semapuroni kana maapuroni, vanoonekwawo seanowirirana nechiratidzo, uye nekudaro vanokurudzira kuvimba kukuru, uko kunowanzo shandura kuita sarudzo dzevatengi. Embroidery zvakare yekushambadzira emagetsi ayo anogamuchirwa zvakanaka.
Zvishongedzo zvakagadzirwa muchimiro chemabhegi, nguwani, maT-shirts anowanzo shandiswa mumakwikwi akarongwa nemakambani sechikamu chekusimudzira kwayo kana semahara evatengi.
Machine paki yekushongedza kwemakomputa
Tekinoroji yazvino uye mikana yazvino inotibvumidza kusangana nekukura kwemusika kudiwa kwezvigadzirwa zvine micheka. Kutenda kune michina yemazuva ano, nhasi zvinokwanisika kuita zviuru zvekushongedzwa munguva pfupi apo ichichengetedza kunyatso kugadzirwa. Uku kusimudzira kwehupfumi zvakare kunoshandura mumutengo unokwezva wekushongedza.
Embroidery yekomputa - tekinoroji yatinayo
Michina yemazuva ano ine tsono dzakawanda dzinofanira kuvezwa neshinda mavara. Iyo yekushongedzwa maitiro inotarisirwa necomputer chirongwa icho dhizaini yacho chinoiswa. Iri kudivi redu kuona nzvimbo yakakodzera yekuisa machira uye kukura kwayo. Embroidery inokurudzirwa kumapurojekiti madiki, nekudaro kufarirwa kwayo kwekudhinda marogo, mazita emakambani, masangano uye zvikoro.
Zvakanakira nekuipira kwekushongedza kwemakomputa
Kuonekwa kwezvipfeko zvine zviratidzo chinhu chinoita kuti zvionekwe. Yakanyatsogadzirwa machira inopa machira mhando nyowani uye runako, uye iyo mhando inoshambadzirwa nayo inowana mukurumbira. Iko hakuna kudikanwa kwekushushikana kuti iwo magiraidhi kana zvinyorwa zvichabvaruka mukugezesa kana mushure menguva refu yekushandisa.
Kushongedza kwemakomputa chikamu chakakosha chekupfeka uye nekudaro chine mukana wakakura pamusoro pedzimwe nzira dzinobvisa kana kugadzira matanda kuburikidza nekucheka zvishoma nezvishoma Embroidery yemakomputa inogona kuve chero chero ruvara. Iyo chete yekumisikidzwa iruvara rwetambo yakashandiswa.
Kushongedza kunoitwa pamwe nekuvhiya chaiko nekuda kwekutonga kwemakomputa. Iyo hunyanzvi uye kunyatsoita kwekushongedza kwemakomputa inobvumira kugadziriswa kwepamusoro kwemaitiro akavezwa Embroidery inongobhadhara nezvakawanda mavhoriyamu.
Imwe bhenefiti yekuwedzera ndeyeye-yenguva-mutengo wekugadzirira chirongwa chekushongedza, icho chinosara mudura redu rezvakanaka. Naizvozvo, mune ramangwana, kana mutengi achidzoka kuzo-odhowa zvipfeko zvine dhizaini imwechete, anozobvisirwa mari yechirongwa.
Kushongedzwa kwemakomputa zvakare kune zvakanakira, asi zvinogona kudzivirirwa nekusarudza nzira yekumaka yakakodzera yerudzi rwezvinhu uye dhizaini. Ichi chikonzero nei zvichikurudzirwa kuti ubate nyanzvi usati waendesa chiratidzo chako chekutanga kuti udzivise zvingangove zvakakanganisika.
Kupesana neiyo yakazara-yepamusoro komputa yekudhinda, micheka haigone kushandiswa kusona yakazara giraidhi ine risingaperi renji yemavara.
Zvisinei, izvi hazvisi izvo zvazviri. Embroidery inotaura nezvetsika nekuti yakafanana nejasi remaoko rinoshongedza mbatya dzakanaka. Izvo hazvina chekuita nekitschy, dzinoshambidzwa kupenda.
Embroidery haina kukurudzirwa kuvezwa pazvinhu zvine grammage yakaderera isingadariki 190 g / m2. Yakakura yekushongedza inopa chiratidzo che "nhoo", ichave isingachinjike panguva yekushandisa, uye kana ichishandiswa kune yakatetepa zvinhu - tsono dzinogona kubaya yakadaro yakatetepa zvinhu.
Kumberi komputa pamachira emhando yepasi pasi nehuremu hwadzika haigoni kushongedzwa. Izvo zvinofungidzirwa kuti girafu yezvimedu zvemicheka inofanira kudarika 190 g / m2. Nekudaro, zvakawoma kufungidzira kana yakarongedzwa logo pane tacky T-shati yakaonda zvekuti zvese zvinoratidza kuburikidza nazvo.
Iko kuruka macomputer kunodhura zvakadii?
Embroidery yekomputa ingangoita zvoupfumi. Nekudaro, zvinhu zvinoverengeka zvinoita basa mukuyera kwakarurama. Mucheka wega wega unodhura kana uchiodha zvimwe zvigadzirwa. Uye zvakare, saizi yekushongedzwa uye kuomarara kwemifananidzo zvine simba rakakura pamutengo, izvo zvinoshandura mukukoshesa kwekushongedzwa kwekushongedzwa. Iyo yakakura yekushongedza, inowedzera kinks, musanganiswa uye yakakura saizi, iyo yakanyanya kuwanda yekushongedza. Zvakare huwandu hwenzvimbo panofanirwa kuiswa machira (semuenzaniso logo pamberi pabhokisi reruboshwe + logo iri pakati kumashure) yakakosha pamutengo weyuniti. Mutengo wacho hauwanzo kukanganiswa nehuwandu hwemavara anoshandiswa, sezvo mushini wekusona une tambo dzakawanda. Mari yekugadzirira inofanirwa kuwedzerwa kune yekutanga kurukwa chirongwa chekushongedzaiyo yatove mudura redu uye nekudaro haina kuwedzerwa kune inotevera mirairo.
kombiyuta yemakomputanezvakarukwa pambatyaT-shati yakashongedzwaT-shati ine logozvipfeko zvine logozvipfeko zvine zvakanyorwapolokutara micheka paT-shirtszvipfeko zvinoratidza mucheka ne logo